မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲလာသော COVID-19 • Zifam Myanmar
Home » မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲလာသော COVID-19
Credit – Sayar Gyi Professor U Nyunt Thein
အခု COVID-19 ရောဂါဟာ အချို့နိုင်ငံတွေမှာ တတိယလှိုင်း ( 3rd Wave) အချို့မှာ တော့ စတုတ္တလှိုင်း ( 4th Wave) တောင်ပြန်ဖြစ်နေကြတာသတိချပ်ကြစေလိုပါတယ်။ မိမိတို့နိုင်ငံမှာလည်း ဒီရက်အတွင်း ရ သလောက် စစ်နေတဲ့အထဲမှာ ပိုးတွေ့လူနာ ( COVID positive) ရာကျော် တွေ့နေကြရတာဟာ ပေါ့ပေါ့တန်တန် မလုပ်သင့်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်လှိုင်းဘဲဖြစ်ဖြစ် COVID-19 ကိုကာကွယ်နိုင်တာကတော့
(၁) မလိုရင် အိမ်ပြင် မထွက်နဲ့၊ လူစုလူဝေးရှောင်၊
(၂) မဖြစ်မနေထွက်ရရင် ခပ်ခွာခွာ( ၆ပေ အကွာနေ)၊
(၃) Face Mask နှာခေါင်းစည်း ပါးစပ်စည်း ကို စံနစ်တကျ တပ် / စွန့် ၊
(၄) လက်ကို တခုခုထိပြီးတိုင်း / အပြင်ကပြန်လာတိုင်း မကြာခဏ စံနစ်တကျ အနဲဆုံး စက္ကန့် (၂၀) ဆပ်ပြာနဲ့ရေနဲ့ဆေး ၊ အပြင်မှာဆို အရက်ပြန် ၆၀-၇၀% ပါ လက်သန့် ဆေးရည် နဲ့စံနစ်တကျဆေး ၊
(၅) ကိုယ် ခံစွမ်းအား ပြည့်အောင် အိပ်ရေးပျက်မခံနဲ့ ၊ အာဟာရပြည့်အောင်စား ၊
(၆) ချောင်းဆိုး. နှာချေရင် လက်ကိုင်ပုဝါ / တစ်သျှူးစက္ကူ / လက်မောင်း ခံပြီး ဆိုး/ချေ စတဲ့ ကာကွယ်ရေးကျင့်စဉ်တွေဘဲဖြစ်ပါတယ်။
COVID-19 ရောဂါ ဟာ ကမ္ဘာပေါ်က လူသားတွေကိုဒုက္ခပေးနေခဲ့တာ ၂၀၁၉ နှစ်ကုန်ခါနီး တရုပ်ပြည်ဝူဟန်မြို့က စဖြစ်တာဆို တနှစ်ခွဲကျော်ရှိခဲ့ပြီး မိမိတို့နိုင်ငံအနေနဲ့ဆို ၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မတ်လ(၂၃) ရက် မှာ ပထမဆုံးပိုးတွေ့လူနာ စတွေ့ခဲ့တာမို့ တနှစ် နှစ်လ ကျော်ခဲ့ပါပြီ။
လောကကြီးထဲမှာရှိနေခဲ့တဲ့ ဗိုင်းရပ်ရောဂါပိုးအမျိုးမျိုးဟာ သူတို့ရဲ့ (Survival ) ရှင်သန်ရပ်တည်မှု အတွက် မျိုးရိုးဗီဇ ပြောင်းလဲခြင်း ( Genomic Mutation) အမြဲတစေ လုပ်လေ့ ဖြစ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ၂၀၁၉ နှစ်ကုန် ကစခဲ့တဲ့ ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်ပိုးဟာလည်း လောကကြီး ထဲပေါ်လာပြီး မကြာခင်ဘဲ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဗိုင်းရပ် သဘာဝအရ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်းဖြစ် လို့ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပိုးအသစ်ဟာ ကူးစက်နှုန်းနဲ့ ပြင်းထန်မှု လျော့သွားရင် လူတွေမသိဘဲပျောက်ကွယ် သွားနိုင်ပေမဲ့ ကူးစက်နှုန်းနဲ့ ပြင်းထန်မှု ပိုလာတဲ့အခါတော့ လူသားတွေကိုပိုပြီး ဒုက္ခပေး တော့တာပါဘဲ။
ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်ပိုးရဲ့ အထင်ကရ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်း ကတော့ ဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ ၂၀၂၀ ဖေဖေါ်ဝါရီ လထဲကစဖြစ်ခဲ့တဲ့ D 614 G ခေါ်တဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ အသစ်ပါဘဲ၊ D614G ဆိုတဲ့ မျိုးရိုး ပြောင်းလဲမှု အကြောင်း နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရရင် တော့ COVID-19 ပိုးရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမှာ အမိုင်နိုအက်ဆစ် အတန်း (Amno acid Chain)ရဲ့ နံပါတ် ၆၁၄ နေရာမှာ မူလကရှိနေတဲ့ Aspartate ( D ) အစား Glycine (G) ပြောင်းသွားတာပါ၊ အတိုချုံးပြောရရင်တော့ မူလက D 614 ဖြစ်ပြီး အခုတော့ G 614 ဖြစ်သွားတာပေါ့။ အဲဒီအချိန်ကာလမှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအတော်များများမှာ ပြန့်ပွားကူးစက်ခဲ့ တာဟာအဲဒီ မျိုးရိုးဗီဇအသစ် G614 အမျိုးအစားပါ။ အပေါ်မှာ ဖော်ပြခဲ့သလိုဘဲ အသွင်ပြောင်းပိုးက မူလထက်ပြင်းထန်မှုမှာသေချာတာက တော့ ကုးစက်ပြန့်ပွားမှု သိသိသာသာများတာပါဘဲ။ သုတေသနပြုမှုတွေကနေ ထုတ်ပြန် ထားချက်တွေ အရအရင်ကထက်(၁၀)ဆ ပိုမို ကူးစက် ပြန့်ပွားခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမိမိတို့နိုင်ငံအပါအဝင် တနိုင်ငံလုံး မှာဖြစ်ခဲ့တာ အဲဒီ D 614 G ပိုးသစ်ကြောင့်ပါ။ အဲဒီအချိန်က နဂိုလောက်မဆိုးပါဘူးဆိုပြီး တတ်ယောင်ကား ပြောခဲ့တာတွေကြောင့် ဘယ်လောက် ဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြရသလဲ မှတ်မိကြ မှာပါ ။
အဲဒီနောက်မှာလည်း ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်ပိုးရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်းဟာ ကမ္ဘာအနှံ့ ဆက်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။ သိပ္ပံပညာရှင် တွေကလည်း ဒီပြောင်းလဲမှုတွေကို မျက်ခြေမပြတ် စောင့်ကြည့်လေ့လာနေခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီထဲမှာမှ Cog-UK လို့ခေါ်တဲ့ ယူကေနိုင်ငံက Covid-19 Genomic Consortium အဖွဲ့ကြီး၊ ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်ပိုးတွေရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇ ပြောင်းလဲမှုတွေ သိန်းနဲ့ချီပြီးရှိနေတာကို စူးစမ်းလေ့လာနေတဲ့ အဖွဲ့ကြီး က UK နိုင်ငံ Kent မြို့မှာ Genome အသစ်နဲ့ပိုးကိုစတွေ့ခဲ့ကြပြန်ပါတယ်။ တချိန်ထဲမှာ တခြား နိုင်ငံတွေမှာလည်း တွေ့နိုင် ရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာအနှံ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေ ကတွေ့ခဲ့ကြရာက new strain, B.1.1.7 ကိုလူသိများလာကြပါတယ်။ ယူကေနိုင်ငံက Public Health England က Variant under investigation : VUI – 202012/01 (the first Variant Under Investigation in December 2020) / Variant of Concern 202012/01 (VOC-202012/01) ဆိုတဲ့ အမည်မျိုးတွေပေးခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီ မှာမှ မျိုးရိုးဗီဇ တခုက N501Y လို့ခေါ်ကြတဲ့ amino-acid site 501မှာ asparagine နေရာမှာ tyrosine ပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောပါ။ အဲဒီ မျိုးကွဲ ဗိုင်းရပ်အသစ် B.1.1.7 ဟာ UKတင်မက USA , Japan, Brazil, Africa and Asia နိုင်ငံတွေမှာပါ ၂၀၂၀ အကုန် ၂၀၂၁ နှစ်ဆန်းမှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။
ဒီနောက်မှာလည်း ကိုဗစ်ဗိုင်းရပ်ပိုးရဲ့ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲခြင်းတွေ ဖြစ်နေဆဲ မျိုးရိုး အသစ်တွေဆက်တိုက် ပေါ်နေဆဲမို့ Variant of Interest ( VOI) , Variant of Concern( VOC), Variant of High Consequence(VOHC) ဆိုတဲ့ အမည်တွေနဲ့ အများကြီး ရှာဖွေတွေ့ရှိနေကြပါတယ်။ အဲဒီထဲမှာ ယူကေက Kent variant (also known as B.1.1.7) က ရှိနေသေးသလို အဲဒီ B.1.1.7 မျိုးရိုး သစ်မှာမှ မျိုးရိုးကွဲစိပ် (၁၇) ခုမက ထပ်ကွဲနေတာကို တွေ့နေရပြီး အချို့ဟာ ကူးစက်မှုရော ပြင်းထန်မှုပါ မြန်တာပိုတာတွေ့နေကြရပါတယ်။ South Africa variant (B.1.351) ကိုယူကေ အပါအဝင်နိုင်ငံ(၂၀) ကျော် မှာတွေ့နေရ ပြီး တချို့ (B.1.351) လူနာတွေဟာ ယခင် B.1.1.7ပိုးနဲ့ ရောဂါဖြစ်ထားဖူးတွေဖြစ်နေသလို တချို့ဆိုရင်လဲ ကာကွယ်ဆေး Vaccine ထိုးပြီးသူတွေ ဖြစ်နေကြပါတယ်။ Brazil variant (also known as P.1) နဲ့ Indian variant (also known as B.1.617) တွေကိုလည်း ယူကေနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေ သာမက အာရှနိုင်ငံ၊ အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာလည်း တွေ့နေကြရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့လူသားတွေကို တနှစ်ခွဲကျော်ဒုက္ခပေးနေတဲ့COVID-19 နဲ့ပတ်သက်လို့ အရင်သိထားတဲ့ ရောဂါခံစားရမှုတွေအပြင် ပိုသိလာ ဖြစ်လာကြတာ တွေကတော့ ရောဂါလက္ခဏာတွေမှာဖြစ်နေကြ ချောင်းဆိုး၊ အနံ့ပျောက်၊ အရသာပျက်၊ ဖျား၊ မော တာတွေအပြင် မျက်စိနာ ပြီးနီတာ conjunctivitis၊ ခေါင်းကိုက်တာ headache၊ ဝမ်းပျက်တာ diarrhea၊ ခြေ လက်တွေ အရောင်ပြောင်းတာ အကွက်တွေထ တာတွေ discolored fingers and toes ကိုတချို့မှာတွေ့နေကြရပါတယ်၊ ကူးစက်မှု အနေနဲ့လည်း အများ လက္ခံထားတဲ့ Droplet spread အမှုန်အမွှားမှ ကူးခြင်းအပြင် Aerosol လေထဲက ကူးနိုင်မကူးနိုင်ဆိုတာလည်းအခုထိ အငြင်းပွား နေကြဆဲပါ။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအများမှာ အခုထိုးနေကြတဲ့ Vaccine ကာကွယ်ဆေး အမျိုးမျိုး အနေနဲ့လဲ အခု မျိုးရိုး ဗီဇအသစ်ကို ရာနှုန်းပြည့်ကာကွယ်မှုရှိ မရှိ ဆိုတာလည်း ဘယ်သူမှ ကံသေကံမ သေချာပေါက်အာမခံ ပြောနိုင်ခြင်း မရှိကြသေးပါဘူး။
ဒီCOVID-19 စဖြစ်ထဲက အခုထိ မပြောင်းလဲတဲ့ အမှန်တရားအဖြစ်ရှိနေခဲ့တာတော့ အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ ကာကွယ်ရေးနည်းလမ်းတွေပါဘဲ၊ ဒါကြောင့် အမျိုးတို့ရေ
(၃) Face Mask နှာခေါင်းစည်း ပါးစပ်စည်း ကို စနစ်တကျ တပ် / စွန့်၊
(၄) လက်ကို တခုခုထိပြီးတိုင်း / အပြင်ကပြန်လာတိုင်း မကြာခဏ စနစ်တကျ အနဲဆုံး စက္ကန့် (၂၀) ဆပ်ပြာနဲ့ရေနဲ့ဆေး ၊ အပြင်မှာဆို အရက်ပြန် ၆၀-၇၀% ပါ လက်သန့် ဆေးရည် နဲ့စနစ်တကျဆေး၊
(၅) ကိုယ် ခံစွမ်းအား ပြည့်အောင် အိပ်ရေးပျက်မခံနဲ့ ၊ အာဟာရပြည့်အောင်စား၊
(၆) ချောင်းဆိုး. နှာချေရင် လက်ကိုင်ပုဝါ / တစ်သျှူးစက္ကူ / လက်မောင်း ခံပြီး ဆိုး/ချေ၊
စတဲ့ ကာကွယ်မှုများမမေ့မလျော့လုပ်ကြရင်း မိမိရော မိသားစုနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ပါ ဒီရောဂါဆိုး မဖြစ်အောင်ကာကွယ်ကြပါအမျိုးတို့ရေ